IiHacks ze-EFT 🥇 Ukukopa, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
Ukubalekela eTarkov kuya kuba lula kakhulu xa unakho ukukopela ngokufanelekileyo. Jonga i-EFT Aimbot yethu, i-ESP, iWall Hack, kwaye akukho kuphinda kubuyiswe!
Sele uyithengile i-EFT Hack? Fumana amanyathelo alandelayo apha
Nceda uqaphele: Ngaphambi kokuba uthenge ii-EFT hacks zethu, qiniseka ukuba isixhobo osikhangelayo ukuba usithenge sihlaziyiwe kutshanje okanye sisekwi-intanethi. Ngelixa sihlala sihlaziya izixhobo zethu, kukho ukulibaziseka ngexesha lokuhambisa kwezinye iimeko; Ngelixa ihlala ikhawuleza, inokuthatha iiyure ezimbalwa. Zonke izixhobo zethu zitshixiwe nge-HWID, oko kuthetha ukuba ungazisebenzisa kwikhompyuter enye-qiniseka ukuba ikhompyuter yakho iyahambelana nazo zonke izixhobo zethu kwangaphambi koko. Akukho mbuyiselo iya kunikwa wakube UKUJONGE isitshixo semveliso!
Onyuliweyo wethu EFT Hacks
Ii-Hacks ze-EFT, i-Aimbot, i-Norecoil, i-ESP, iWall Hacks kunye nokunye
Thenga EFT IiHacks ngaphakathi 4 amanyathelo
Khetha umdlalo ongathanda ukuthenga isitshixo semveliso
Khetha i-hack efanelekileyo efanele iimfuno zakho (i-EFT Aimbot, i-ESP, i-NoRecoil, njl.)
Yenza intlawulo yakho usebenzisa iindlela zethu zokuhlawula ezikhuselekileyo (iprosesa eyodwa ifunyenwe kwiGamepron)
Ukufumana ukufikelela kwiqhosha lakho kunye nokukhuphela iiHacks ze-EFT!
Fumana ukufikelela kwiiHacks zakho ze-EFT ngokusebenzisa isitshixo semveliso kunye nokukhuphela ii-cheats ngokufanelekileyo
Kutheni usebenzisa i-Gamepron EFT Hacks?
Ukubaleka kuhlaziyo lwakutsha nje lweTarkov bekuncinci kwaye babonakalisile kwimidlalo yomdlalo etshintsha amandla okusinda. Olona hlaziyo lutsha nje / lomsitho obonakalise i-100% yenqanaba leSanitar kunye noonogada bakhe, isenza ukuba iShoreline ibe yindawo enobungozi.
Ukubaleka kuhlaziyo lwamva nje lwakwaTarkov kweza ecaleni komdlalo osandula ukwenziwa, kwaye yongeza uTagilla kumdlalo, ngubani umntakwabo Killa kunye nomphathi we-scav kwiFektri. Ngaphandle kwalonto, inkqubo yokomelela kwesixhobo sele yenziwe, yonyusa ithuba lokuba isixhobo sakho sijike njengoko sihla.
Uhlaziyo lokugqibela lokubaleka kuTarkov lwaluyinto enkulu, kwaye yayiluliso oluye lwahlekiswa ixesha nexesha. Olona tshintsho lubalulekileyo kumdlalo lubandakanya ukongezwa kwenkqubo yescav yedumela, enenjongo yokunciphisa ubundlobongela phakathi kwescavs. Ezinye izongezo zibandakanya ukungasebenzi kakuhle kwezixhobo.
Ngelixa i-Escape From Tarkov ihlaziywa rhoqo ukunceda i-squash bugs kunye neminye imiba emincinci, umdlalo uhambe okwethutyana ngaphandle kokubona uhlaziyo olukhulu. Abadlali bacinga ukuba i-BSG okwangoku inzima emsebenzini wokuphuhlisa iiStrats zemephu yaseTarkov kwaye abanye abadlali balindele ukusula kungekudala, kodwa loo nto kukuqikelela.
Ukubalekela eTarkov sisihloko esizisa abadlali abatsha kunye nabadumileyo, njengoko omabini la maqela eza kukhwaza ngomsindo ngaxa lithile! Ayenzelwanga ukuba ibe ngumdlalo olula, kwaye oko kuthetha ukuba izokukhathaza ngamanye amaxesha- imidlalo yenzelwe ukuba ibe mnandi, ke kutheni uzikhathaza ngalo lonke olo xinzelelo? Ungasebenzisa i-Escape yethu kwi-Tarkov Hack ukuhambisa izithonga zokubulala ngonqakrazo lwempuku yakho, njengoko i-EFT Aimbot yethu yiyo yonke into oyifunayo ukuthatha abadlali abanezakhono. Ukuzibophelela kuhlaselo ngaphakathi ku-Escape from Tarkov kuthetha ukuba uza kuchitha ixesha elininzi ufunda ubuchwephesha bomdlalo, kodwa oko akonelanga! Nokuba i-bots ekufuneka ujongane nayo icwangcisiwe ukwenza ubomi bakho bube sisihogo esiphilayo, kwaye kufuneka sitsho, benze umsebenzi omnandi ngayo.
Njengokuba ufuna ukukrazula iinwele zakho ngenxa ye "Scavs" ezigqithileyo kwakungonelanga, kuya kufuneka ukhathazeke ngabadlali bokwenyani abaphazamisa amava akho. Iintshaba zekhompyuter ezigubungele izithunzi, zilinde ukukuphoxa nangawuphi na umzuzu asiyiyo kuphela isisongelo phaya. Xa uphosa abadlali bokwenyani kumxube kuya kufuneka ukhathazeke ngamanye amaqhinga, kunye nabantu abasebenzisa iiakhawunti zesmurf.
Ungathembela kwi-Gamepron ukuhambisa ezona zinto zibalaseleyo ze-EFT Hack, njengoko sineqela labadwelisi benkqubo abazinikeleyo abenza uninzi lwezixhobo zethu. Ukuba asizenzelanga ukukopela ngokwethu, sisebenza ngokusondelelene kakhulu namaqabane aya kuzenza ngokwawo-ajolise kumgangatho njengathi, ke akukho sizathu sakuxhalaba! Asizinqumli iikona kunye neempawu ezinjengeAimbot, i-ESP, iWall Hack kunye neNoRecoil, esi sisixhobo ongasayi kuphoxeka ngaso.
Izixhobo zethu azibhaqwa ngokupheleleyo, ke zonke iiakhawunti oceba ukukopela ngazo ziya kuhlala zikhuselekile (ukuba nje usebenzisa i-Escape from Tarkov Hacks ebonelelwe yiGamepron!). Ukugcina abasebenzisi bethu bekhuselekile kuye kwahlala kuyeyona nto iphambili okoko sasungula le webhusayithi kuba kutheni uzikhathaza ngokufuna ukuvalwa ngokukhawuleza? Sikuvumela ukuba uqhekeze kwaye ugcine yonke inkqubela-phambili oyisebenzele nzima ukuyifumana, yiyo loo nto bonke abagcini bafuna uninzi lwabo kwi-EFT cheats. Ukulungele ukuba yingxaki kwilizwe lokubaleka eTarkov? Ukufikelela kwiiHacks zethu ze-EFT namhlanje!
I-EFT Wall Hack (i-ESP)
Ulwazi lomdlali we-EFT i-ESP (Igama, imivalo yezeMpilo, umgama)
Into ye-EFT ESP eneefilitha
Imowudi ye-EFT super jump (akukho monakalo wokuwa xa uyenzileyo)
Ithambo le-EFT kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa.
Ukuhlawula kwakhona i-EFT
Ngokufanelekileyo EFT yimfumba Iimbonakalo
Sebenzisa i-Escape yethu kwi-Tarkov Player ESP ukubona iintshaba kwiindawo eziqinileyo nezintle! Unokucwangcisa uhlaselo lwakho ngokuchanekileyo usebenzisa i-Gamepron.
Ukanti enye into eluncedo kakhulu iya kuba luLwazi loMdlali i-ESP, ekuvumela ukuba ubone amagama abo, banempilo engakanani, kunye nomgama.
Ukubaleka kuTarkov Into ye-ESP enezihluzi kufanelekile ekuphangeni, njengoko unokuthintela ukuchitha ixesha lakho ngezinto ezingafunekiyo kwaye ujolise ekufumaneni izinto ezilungileyo.
Ukubalekela eTarkov ngumdlalo onzima, ukutsho nje okuncinci, kodwa ukusebenzisa i-EFT Aimbot kuyakuvumela ukuba ugqwese ngaphandle kwezisongelo ohlangabezana nazo.
Umkhondo we-EFT Bullet (osebenzayo kwimigama emifutshane naphakathi)
Unokulandela umkhondo wendawo yeebhulethi zakho e-Escape from Tarkov ngokwenza i-EFT Bullet Track feature (igqibelele xa kuthathwa iifutshane ezithatyathiweyo ukuya kuluhlu oluphakathi).
Umyalezo owenziwe ngokwezifiso uya kubonisa kwiscreen sakho nanini na utshaba lujolise kuwe (okanye lusondele kumlinganiswa wakho).
Imo ye-EFT yokutsiba kakhulu (akukho monakalo wokuwa xa uyenzileyo)
Ukuwa kwiindawo eziphakamileyo ezingenangqondo ngaphandle kwesiphumo seGamepron! I-EFT yethu yokuqhekeza ikwabandakanya iMowudi yokuTsiba okuMkhulu okuthintela ukonakala kokuwa nokuba uphakame kangakanani.
Ithambo le-EFT kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa
Lungisa ukubaleka kwethu kwiTarkov Aimbot ukuze sisebenze nangona ungathanda! Ngokubekwa phambili kwamathambo kunye nezinye izinto ezinokuqwalaselwa, i-Gamepron inayo yonke into oyifunayo ukuze uphumelele.
Uhlolo olubonakalayo lwe-EFT
Xa usebenzisa i-Escape yethu kwi-Tarkov Aimbot ungenza ukuba uphawu lokuKhangela lubonakale, likuvumela ukuba uqinisekise ukuba ubethile (kwaye wabulala!) Iithagethi zakho.
Amanqanaba okwenyani okubuyiswayo anikezelwa ekubalekeni eTarkov ayinkathazo, kodwa ungawashenxisa ngokuvula iRecoil Compensator.
Yiba nguMdlali oBalaseleyo we-EFT kwiPlanethi
Umdlalo unzima ngokwaneleyo njengoko unjalo, ke musa ukuyenza ibe nzima ngakumbi kuwe ngokwala ukusebenzisa i-Escape yethu engafakwanga kwiTarkov cheats. Zonke izixhobo zethu azibhaqwa ngokupheleleyo kwaye ziya kukunceda uphumelele umdlalo omninzi, akukho nto ilahlekileyo. Ukuba ukhe wafuna amava ukuba kunjani ukuba nguthixo phakathi kwabantu ngelixa udlala i-Escape from Tarkov, i-Gamepron inesisombululo.
Ukubaleka Okudumileyo kwiiTarkov Hacks kunye nokukhohlisa
Ukubaleka Tarkov Aimbot
Ukubaleka Tarkov ESP kunye Wallhack
Okunye ukubaleka kwiiTarkov Hacks kunye nokukhohlisa
Ngaba ujonge ukufikelela kwelona Qhinga liBalaseleyo kwiiTarkov Hacks ezinokuthengwa yimali? Awunakho ukubala nasiphi na isixhobo sasimahla esifumaneka kwi-intanethi ukuhambisa izithembiso zabo, mayingaze ikugcine ukhuselekile ngelixa usebenzisa ii-cheats. Xa ufuna ezona mpawu zithandwayo zifunyenwe ngaphakathi kuLuhlu lweTarkov Hack, i-Gamepron kuphela kwendawo onokuthembela kuyo-ngelixa isenokuvakala ikhetha, uphononongo oluvela kubasebenzisi bethu abaqinisekisiweyo bayazithethela. Ukuba kukho indlela yokuphucula kwi-hack osele uyazi ukuba sikuyo, njengoko umgangatho wehacks zethu uza kumela ishishini lethu ngokwalo! Ngeempawu ezinjengokubaleka kwiTarkov Aimbot, i-ESP, iWall Hack, iNoRecoil, kunye neenyawo, sinayo yonke into oyifunayo ukukhupha inkcaso.
Lixesha lokuba utyale imali kulonwabo lwakho! Nokuba ungumdlali odlala wedwa okanye wonwabele ukudlala nabahlobo, usebenzisa i-EFT Hack yethu iya kwenza amava akho abe mnandi ngakumbi.
Xa iichips ziphantsi kwaye wonke umntu okweli qela lakho eswelekile, inye kuphela into onokuyithemba kumdlalo onje ngokubalekela eTarkov- injongo yakho. Ukuba awunanjongo ingenakulinganiswa kulo mdlalo uza kuba nexesha elibi, kwaye kungenxa yokuba basebenzise injini ye-physics xa besenza umdlalo. Awungekhe ujikeleze nje ngokungathi ngumntu ophambeneyo njengokuba ubuya kwenza xa udlala "ngefreythi emnandi", ushukuma kancinci kwaye imilo yoompu inamandla kwaye inomoya omfutshane.
Awunakho ukuthembela kwizixhobo zakho ukuze uhlale uphila kwiimeko ezininzi, njengoko abadlali beya kuthi bagcwale kuyo yonke imephu; Wonke umntu ufuna ukufumana izandla zakhe, kodwa ukusebenzisa i-EFT Aimbot nge-Bone Prioritization kunye ne-Auto-Aim / Umlilo uza kukufumana ngokukhawuleza (kwaye ungaphazamiseki). Iintshaba ziya kwenza konke okusemandleni ukukunciphisa, kodwa unokhetho lokuvumela ukubulala kwangoko kwaye ubabukele beqhekeka ngonqakrazo olunye lwempuku.
I-Escape eyi-Tarkov ESP ayizukubonisa indawo yeentshaba, izakukunika ukufikelela kulwazi lotshaba oluza kukuvumela ucwangcise uhlaselo lwakho ngokufanelekileyo. Ungabona apho utshaba lubekwe kwindawo eqinileyo kunye ne-opaque, kodwa ungabona ukuba ngubani igama labo, banempilo engakanani, nokuba bakude kangakanani. Ukubalekela iTarkov ESP kunye nabaphuhlisi beWall Hack bayasilela ekuphumezeni eli nani leempawu rhoqo, kodwa asoyiki mngeni apha eGamepron!
Unokusebenzisa i-Item ESP ngesixhobo sokucoca ulwelo ukuba ubone ukuba yeyiphi eyona nto iphambili efihliweyo ngexesha lokuhlasela kwakho. Ukuthatha i-junk yinto yexesha elidlulileyo xa usebenzisa i-Escape yethu kwi-Tarkov ESP, njengoko ezona mipu zibalaseleyo ziya kuphakanyiswa nokuba kweyona ndawo imnyama. Nokuba ufuna ukuba ngumphangi osebenza ngakumbi okanye oqhekezayo, ukusebenzisa i-EFT ESP kunye neWall Hack yeyona ndlela ilula yokwenza zombini.
Zingela phantsi iintshaba zakho njengexhoba abanazo ngeempawu zethu zeNyawo! Ukuba umntu othile uyatyibilika okanye uyakwazi ukudlula kuwe, inqaku leNyawo linokusetyenziselwa ukubona apho baya khona. Uya kuba nomkhondo wendlela okhokelela ngqo kwiintshaba zakho, kulapho unokukwazi ukwenza imo "yomonakalo omkhulu" kwaye ubasuse ngokusisigxina kuhlaselo lwakho. Ungasebenzisa nasiphi na isixhobo osifunayo kodwa ube usenza umonakalo omkhulu kunabachasi bakho, ukukunika umda kuwo nawuphi na umlo othathe inxaxheba kuwo. Umgama wethu omdaka ugqibelele xa ulandela ezinyathelweni kwaye kufuneka wazi ukuba usondele kangakanani kuwe ' Ukufumana kwakhona, into yokugqibela oyifunayo kukumangaliswa lutshaba olulandelayo!
Ngokwenza ukuba i-EFT Hack yethu inikwe ukufikelela kuzo zonke ezi zinto kunye nezinye ezininzi, nokuba ufumanisa ukuba uyenyuka ngokuchasene nabanye abagxeki, uya kuba nesona sixhobo siphezulu (kwaye ngenxa yoko, phuma phambili!)
Sineentlobo ngeentlobo zeempawu ezahlukeneyo ezibandakanyiweyo kwindawo yethu yokubaleka eTarkov Hack, zonke ezizokukunceda uthathe phantsi iiScavs kunye nabadlali bokwenene ngoxolo. Zonke izinto ebesithethile ngazo kwangaphambili ziya kubakho kwi-EFT Hack yethu, kodwa sisiqalo nje-sikwabonelela ngokuthandwa kwe-2D Radar kunye ne-stellar anti-cheat protection ukugcina zonke iiakhawunti zakho zikhuselekile. Inkqubo yokufumanisa ukukopela okuzenzekelayo esetyenziswa ngaphakathi kwe-Escape evela eTarkov ayizukufaniswa nezixhobo zethu, njengoko sikuvumela ukukopela ngaphandle kokufumana naziphi na iziphumo.
Umsebenzi wethu weNoRecoil yenye into eyaziwayo ukuba uyiqwalasele, njengoko i-Escape from Tarkov izokuvuza abo banezandla ezizinzileyo. Ukuba unokwenza umhlaba kwiipesenti ezili-100, akukho nto ichazayo ukuba uza kukwazi kangakanani ukuqhubela phambili kuhlaselo olunye, kungasali nto ke. Ukuba ufuna ukusila kube lula xa ubaleka eTarkov, akukho ndlela ingcono yokwenza inkqubela phambili.
IiHacks ze-EFT imibuzo
Kutheni ii-EFT Hacks zethu
Ukubaleka kwethu eTarkov Hack akuyi kulandela indlela yesiNtu, oko kuthetha ukuba ungalindela ukubona umgangatho ongaphezulu kwezixhobo esizivelisayo. Iimpawu esiziphumezileyo ngaphakathi kwe-EFT Hack yethu azifumaneki naphi na, zisinika inkonzo ekhethekileyo ngakumbi xa kuthelekiswa nabanye ababoneleli bemvume yokuqhekeza. Ukuba ufuna ukukopa ngokukuko nangokukhuselekileyo, i-Gamepron ihlala iyeyona ilungileyo.
Kutheni i-EFT Aimbot yethu
Sebenzisa i-Escape yethu kwi-Tarkov Aimbot kuyakuvumela ukuba uthathe iintshaba ngaphandle kokuthatha nawuphi na umonakalo, njengoko uza kuba nakho ukukhomba i-headshot ukusuka kumgama omde. I-EFT Aimbot iya kukwenzela wonke umsebenzi onzima, ikuvumela ukuba uhlale phantsi kwaye uphumle-ukuqokelela ukuphanga kunye nokuqhubela phambili akunakuze kuchaphazeleke ziintshaba.
Kutheni i-EFT yethu ye-ESP
Ukusebenzisa i-Escape yethu kwi-Tarkov ESP kuya kukuvumela ukuba ubone malunga nayo nayiphi na into ebalulekileyo, kwaye kubandakanya okungaphezulu kweentshaba zakho. Ungawabona amathambo omdlali ngokuqina / iindawo ezi-opaque, kodwa ungabona ukuthanda izixhobo ze-ESP, i-ESP eqhumayo, amagama abadlali, kunye nomgama wabo. Awunyanzelekanga ukuba ucinge ukuba utshaba lukufuphi, njengoko uyazi ngokuqinisekileyo nge-EFT ESP
Kutheni i-EFT Wallhack yethu
Ukubalekela eTarkov kuneekona ezininzi kunye neekrani zokukhathazeka, yiyo loo nto i-EFT Wall Hack yethu iza kukunceda ugcine ukubila. Uya kuhlala usazi ukuba ziphi izinto eziphambili kunye nabachasi abakhoyo, njengoko unokujonga ngokuthe ngqo kwiindonga ngokuthanda-ukubona amabala anokubakho kunye nemigibe akusengomsebenzi otyhafisayo.
Kutheni i-EFT Norecoil yethu
Ukuchaneka kunokuba ngumahluko phakathi kokuphumelela kunye nokuphulukana nemipu, yiyo loo nto sikuvumela ukuba uyisuse ngokupheleleyo ngokunika amandla inqaku leNoRecoil. Inani lokuchacha ekufuneka ujongane nalo liya kwahluka kwizixhobo, kodwa ngokwenza umsebenzi weNoRecoil, awunakukhathazeka malunga nokuba ukhetha yiphi.
Ungazikhuphela njani ezona hacks zilungileyo ze-EFT?
Sikwazile ukwenza inkqubo yokukhuphela ibe yeyona ithe ngqo, nje ukuba ukhusele isitshixo sakho semveliso unokukhuphela i-EFT Hack yakho ngokukhawuleza (ngenxa yokuba indawo yokubamba iyafumaneka). Elona xesha lide kuya kufuneka ulinde indawo yokukhuphela ukuze uvule iya kuba ziiyure ezi-8 ukuya kwezi-9, nangona uninzi lwamaxesha ungazikhuphela xa sele uthengile.
Kutheni ii-EFT hacks zakho zibiza kakhulu kunezinye
Asizikhuphi amava angama-barebone ngokusaba kwethu eTarkov Hack, kuba ayisiyiyo indlela esisebenza ngayo apha kwiGamepron. Njengayo nayiphi na into oyithengayo, kuya kufuneka uhlawule umgangatho-nayo, i-EFT Hack yethu inokubonelelwa kuphela kwinani elithile labantu ngexesha. Phosa kwinto yokuba bengafumaneki kwi-100% kwaye ixabiso alibonakali libiza kakhulu!
Nokuba ucwangcise ixesha elingakanani kusiko, sinalo ixesha elifanelekileyo lokufumana iimfuno zakho. Sinokukuthengisela isitshixo semveliso esiza kusebenza yonke imihla, ngeveki, okanye ngenyanga; Nokuba uceba ukukhangela into encinci, okanye ixesha elide, i-Gamepron inokukunceda ufikelele ekubalekeni okungcono kwiTarkov Hacks kwi-Intanethi. Akukho sidingo sokujonga kwenye indawo!
Kuhle EFT yimfumba Iimbonakalo